Budata NX Studio maka Windows
Budata NX Studio
Free Budata maka Windows (231.65 MB)
Budata NX Studio,
NX Studio bụ mmemme zuru ezu ezubere iji lelee, hazie ma dezie foto na vidiyo ejiri igwefoto dijitalụ Nikon.
Ijikọta ikike foto na vidiyo nke ViewNX-i na nhazi foto na ngwaọrụ nrụgharị nke Capture NX-D notu usoro ọrụ zuru oke, NX Studio na-enye usoro ụda, nchapụta, mgbanwe mgbanwe, nke ị nwere ike itinye ọ bụghị naanị na RAW kamakwa Faịlụ onyonyo JPEG/TIFF. Agụnyere ngwaọrụ ndezi. Ọ na -enyekwa atụmatụ dị iche iche maka ọrụ dị ka ndezi data XMP/IPTC, ijikwa atọrọ atọ, ilele maapụ na -egosi ebe ịgbapụ dabere na data ọnọdụ agbakwunyere na onyonyo, na ibugote onyonyo na ịntanetị.
Ilele Foto: Ị nwere ike ịlele foto na nlele onyonyo wee chọta foto ịchọrọ ngwa ngwa. Enwere ike ilele onyonyo ahọpụtara nibu karia nime otu etiti iji lelee nkọwa dị mma. Enwekwara ọtụtụ nhọrọ nlele nke enwere ike iji tulee onyonyo nakụkụ. Ịnwekwara ike ịlele tupu na mgbe elelechara otu onyonyo a ka inyocha nsonaazụ mgbanwe.
Ihe nzacha: Enwere ike ịse foto site na ọkwa na akara. Chọta foto ịchọrọ ngwa ngwa maka ịrụ ọrụ nke ọma.
Meziwanye Foto: Enwere ike ịkwalite foto nụzọ dị iche iche, gụnyere ịhazigharị nchapụta, hue na ntọala ndị ọzọ, ịcha ihe onyonyo ma ọ bụ nhazi onyo RAW, na ịchekwa nsonaazụ ya nụdị ndị ọzọ.
Foto mbupụ: Enwere ike mbupụ ma ọ bụ megharia onyonyo nụdị JPEG ma ọ bụ TIFF. Enwere ike mepee ihe onyonyo a na -ebupu site niji ngwanrọ ndị ọzọ.
Na -ebugote foto na ịntanetị: Bulite foto na NIKON IMAGE SPACE ma ọ bụ YouTube.
Bipute: Bipụta foto wee nye ha ndị enyi na ezinụlọ.
Enwere ike iji NX Studio ọ bụghị naanị ịkwalite foto, kamakwa dezie vidiyo. Enwere ike iji data ọnọdụ etinyere na onyonyo a iji lelee ọnọdụ agbapụ na maapụ.
Ndezi vidiyo (onye na -eme ihe nkiri): Kpochapụ akwụkwọ ndekọ achọghị ma ọ bụ jikọta mkpachị ọnụ.
Data ebe: Enwere ike iji data ọnọdụ etinyere na onyonyo lee ebe agbapụ na eserese ngosi. Bubata ndekọ okporo ụzọ ma gbakwunye data ọnọdụ na onyonyo.
Ihe ngosi mmịfe: Lelee dị ka ihe ngosi mmịfe nke foto nime folda ahọrọ.
Igwe onyonyo dijitalụ na -akwado
Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, Z 5 na Z 50
Igwefoto SLR dijitalụ Nikon niile sitere na D1 (wepụtara na 1999) ruo D780 (wepụtara na Jenụwarị 2020) na D6
Igwefoto Nikon 1 niile sitere na V1 na J1 (ewepụtara na 2011) ruo J5 (ewepụtara na Eprel 2015)
Igwefoto COOLPIX niile na COOLPIX P950 sitere na COOLPIX E100 (ewepụtara na 1997) ruo ụdị ewepụtara na Ọgọstụ 2019
KeyMission 360, KeyMission 170 na KeyMission 80
Ụdị faịlụ akwadoro
Ihe onyonyo JPEG (Ngosipụta 2.2-2.3)
Ihe onyonyo NEF/NRW (RAW) na TIFF, usoro MPO nụdị 3D, ihe nkiri, ọdịyo, Dust Off data, data ndekọ ọkpụkpọ, yana ịdị elu na data ndekọ omimi nke ejiri igwefoto dijitalụ Nikon mepụta.
NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB) na JPEG (RGB) na MP4, MOV na AVI ihe nkiri ejiri sọftụwia Nikon mepụta.
NX Studio Ụdịdị
Nha faịlụ: 231.65 MB
Mmepụta: Nikon Corporation